QISADII NABI IBRAAHIM | Gaaldiid
Bogga Hore > TAARIIKH > QISADII NABI IBRAAHIM
Qoomkii Nabi Ibraahim waxay caabudi jireen sanamyo, gaarahaan Meerayaasha (Kawaakib) Dayaxa iyo qorraxda.
Kadibna waxa uu Eebe soo diray Nabi uu aad u jecelyahay kana dhigtay (khaliil) macnaha waa ruux aad ugu dhaw Eebe waa Nabi Ibraahim.
Nabi Ibraahim waxa uu ballan qaaday inuu danbi dhaaf u waydiinayo Eebe.
Nabi Ibraahiim isaga oo dhalinyaro ah ayuu ka biyo diiday waxay qoomkiisu caabudayaan. Maalin maalmaha ka mida waxa uu la kulmay qoomkiisa oo usujuudsan sanamyadii kadibna waxa uu waydiiyey waa maxay Tamasiishan aad usujuudsantihiin, waxaynna qoomkiisii ugu jawaabeen inay ka dhaxleen aabayaashood oo ay sidaa u caabudayaan.
Nabi Ibraahim isagoo aad udhiirran ayuu ku yidhi ”idinkaa iyo aabayaashiinba waxaad ku sugantihiin baadi iyo khasaare”. waxay ku dhaheen ”Ibraahimoow ma xaqbaad noola timid mise waad iska cayaaraysaa”. ”waxa uu ku yidhi Eebihiin waa waa Rabbiga Samooyinka iyo dhulkaba aniguna markhaatibaan ka ahay”.
Nabi Ibraahim waxa uu ballan qaaday inuu burburiyo Sanamyada ay qoomkiisu Ilaahay la lamaaneeyeen.
Kadibna way soo qabteen Nabi Ibraahim oo ku dhaheen ma adigaa ayaa sanamyada burburiyey?
Nabi Ibraahim waxa uu ugu jwaabay waxaad weydiisan sanamka wayn hadii uu awood uleeyahay inuu hadlo. Markay fahmeen inaanu sanamku hadlaynin ayey dib isagu noqdeen oo isku dhaheen waxaad tihiin daalimiin, hase ahaatee way ku adkaysteen inay u gargaaraan sanamayadooda waxaanay go’aansadeen in la gubo Nabi Ibraahiim kadiban waa la xabisay/xidhay.
Dab aad darran ayey shideen xataa shinbirta dusha sare maraysey ay la soo dhacayso kulayl iyo hanfi darteed.
Waxa lagu xidhxidhay Nabi ibaraahiim xadhko kadibna lagu tuuray wiish sababtoo ah looma dhowaan karayn dabka.
Dabkii waxa uu nabadgeliyey Nabi Ibraahim, mucjiso xaga Eebe ka timid ayey ahayd sidaasbaanu Nabi Ibraahiim uu Eebe uga badbaadiyey dabkii kana koryeelay dhagartii gaalada.
Inkasta oo ay ahayd daliil iyo astaan lagu garto Eebaha Wayn hadana qoomkiisii maysan rumayn Nabi Ibraahiim.
Waxa rumeeyey oo kaliya wiilkii uuu adeerka u ahaa ee Nabi Luud iyo xaaskiisii Saara.
Arrintii Nabi Ibraahim markay faaftay ayaa waxa maqlay nin boqor ah oo la dhaho Namruud kadibna u yeedhay oo waydiiyey Ibraahimoow ma waxaad sheeganaysaa inaad leedahay Rabbi. Nabi Ibraahiimna waxa uu yidhi haa ”Eebahay waa ka waxna dila waxna nooleeyaa” boqorkii waxa u yidhi ”aniguba waxna waan dilaa waxna waan nooleeyaa”, waxaanu xabsiga ka soo daayey laba nin, mid ka mid ahna waa dilay kii kalena waa sii daayey. Nabi Ibraahiim markuu arkay inuu ninkan murmayo ayuu ku yidhi:- aniga Eebahay waxa uu qorraxda kasoo bixiyaa dhanka bari maalinkasta adigu kasoo bixi qorraxda dhanka galbeed. halkaasbaa lagaga roodaanaaday boqorkii.
Nabi Ibraahiim (N.N.K.H) intuu joogay Ciraaq waxa rumeeyey oo kaliya xaaskiisii Saara iyo wiilkuu adeerka u yahay ee Nabi Luud (N.N.K.H).
Reer Ciraaq markay ka gaaloobeen ayuu ka haajiray Isaga, Saara iyo Luud una baqooleen dhulka barakaysan ee Falastiin.
Nabi Ibraahim iyo Saara (N.N.K.H) waxay galeen Masar kadibna waxa loo sheegay in boqorka ka taliya Masar uu yahay Nin dadka dulmiya, qafaasha haweenka kadibna ku xadgudba.
Ciidamadii boqor ayaa haleelay Nabi Ibraahim kadibna waxay waydiiyeen ruuxa dumarka ah ee la socota waxaanu ugu jawaabay waa walaashay, isagoo uga jeeday inay tahay walaashiisa diinta Islaamka.
Markii saddexaad ayaa boqorkii u yeedhay ciidankiisii oo ku yidhi tani waa shaydaamad ee iga saara, kadibna waxa uu siiyey gabadh Jaariyad boqorka u ahayd oo u shaqaynaysa.
Saara (N.N.K.H) waxay u timid Nabi Ibraahim waxayna ku tidhi Eebe ayaa iga badbaadiyey ninkii daalimka ahaa, waxaana laysoo raaciyey Haajara.
Nabi Ibraahim waxa uu guursaday Haajara waxayna u dhashay wiil yar waa Nabi Ismaaciil (N.N.K.H)
Markaasbay hinaasay/masayray Saara waxaanu Eebe faray Nabi Ibraahim inuu usafro dhul lama degaan ah, kuna taal buuro dhexdood oon beer iyo baad toona lahayn.
Nabi Ibraahim waa uu soo kaxeeyey reerkiisii waxaanu dajiyey meshaas lama degaanka ah, cidna aanay ku noolayn sidoo kale ceel biyona lahayn markaasbuu intuu reerkisii dhigay ayuu ka jeestay. Haajara ayaa ka daba oroday ayadoo waydiinaysa Xagaad nagaga takaysaa, ma cidladan aan cidna daganayn, Nabi Ibraahim wax jawaab ah muusan siinin, markaasbay tidhi ma Eebe ayaa sidaas ku amray, Nabi Ibraahim waxa ugug jawaabay Eebahay ayaa sidaas i faray kadibna Haajara (N.N.K.H) waxay tidhi haddaba Eebe nama dayacayo.
Dhulkan lama degaanka ahi waa Makkah oo waqtigaa waxay ahayd dhul qallafsan oo beerana ka bixin, cidna kunoolayn.
Eebow waxaan dejiyey caruurtaydii (waadi) tog aan beer lahayna oo ah Baydkaaga sharafta leh agtiisa Eebow si ay Oogaan salaadda ee ka yeel Quluubta dadka tii u iilata xaggooda, kuna arzaaq midho waxay mudanyihiin inay shukriyaan.
Isla markiiba waxa uu gawracay Sac, una kariyey cunto martidii kadibna waa soo qaaday oo hordhigay cuntadii hase ahaatee sadexda ninba cuntadii maysan cunin ee gacmihii ayey ka laabteen, markaasbuu Nabi Ibraahim uu dareemay cabsi, kadibna waxay ku dhaheen ha cabsanin waxaan nahay Sadex Malak oo Eebe ayaa nookaasoo diray.
Waxayna kala ahaayeen Malakul Jibriil, Miika’iil iyo Israafiil.
Waxay ku dhaheen, waxan u soconaa qoomkii Nabi Luud oo la halaagayo waxaana asiibaya cadhadii Eebe xumaantii iyo gaalnimadooda awgeed.
Sida uu leeyahay Ibnu Cabaas (I.R.H.N) Eebe waxa uu maqashiiyey ogaysiintii Nabi Ibraahim dadkii waqtigaa noolaa, iyo sidoo kale Malaa’iktii samada joogtay.
Eebenna waxa uu dhisay Baytk ku yaal samada oo la dhaho ( Bayt al-macmuur) oo todobaatan kun oo malak ay ku tukadaan maalin kasta kumana soo noqdaan.
Nabi Ibraahim (N.N.K.H) waxa uu iskaga kala gooshayey Falastiin iyo Magaalada Makkah sabatoo ah waxa daganaa labadii reer.
Eebe waxa uu yidhi waxaad sooo qaada afar shibirood kadibna gawrac oo isku dhex dar xubnaha iyo baalashood sidoo kale dhiigood kadibna saar buur dusheed oo uyeedh way kuu imane.
Nabi Ibraahim waxa uu sameeyey sidii la faray kadibna waa uyeedhay oo way u yimaadeen ayagoo duulaya. Waxaanu Eebe tusay mucjiso iyo mid ka mid ah awoodah ilaahay.
Muddo kadib ayaa Nabi Ibraahim soo booqday wiilkiisa Ismaaciil hase ahaatee ismaysan arkin ee waxa uu la kulmay Nabi Ismaaciil xaaskiisii, waxaanu waydiiyey xaaladooda waxyna tidhi xaaladayadu way xuntahay waxayna bilowday inay ka cabato waxna ka sheegto saygeeda markaasbuu Nabi Ibraahim ku yidhi:- Ismaaciil markuu yimaado salaan iga gaadhsii, waxaanad tidhaahdaa Kaabada gurigaaga badal!
Markuu Ismaaciil yimi ayay u warrantay kadibna waxa uu ku yidhi odaygii kuu yimid waa aabahay waxaanu i faray inaan ku furo, sidaasbaanu ku furay Nabi Ismaaciil.
Khilaaf ayaa ka dhex dhacay labadii wiil ee Nabi Isxaaq dhalay kadibna Yacquub ayey hooyadii u dirtay abtigii oo la dhaho Laabaan.
Nabi Yacquun (N.N.K.H) waxa uu la joogay abtigii mudo aad u dheer kadibna waxa uu guursaday gabar uu abtigii dhalay oo la dhaho Liya, waxayna u dhashay Laba iyo Toaban wiil.
Muddo kadib ayuu aroostay gabar kale uu dhalay abtigii oo la dhaho Raaxiil. Waqtigaa way banaanayd in laba gabdhood oo walaalo ah la wada guursado laakiin diinta Islaamka maysan banayn.
Raaxaan waxay u dhashay Wiil yar oo aad u qurux badan waa Yuusuf iyo walaalkiis kale waa Binyamin.
Nabi Yacquub waxa uu ku soo laabtay magaalada Oorshaliim/ Qudus waxaanu ka dhisay masaajidka Baytul Maqdas.